Lewandowski oo cadeeyay go’aankiisa ugu dambeeya ee ku aadan mustaqbalkiisa Bayern Munich… (Kooxdee ayuu doortay inuu ku biiro?) – Gool FM
(Munich) 01 Dis 2021. Wargayska AS ee ka soo baxa Spain ayaa daaha ka qaaday rabitaanka weeraryahanka reer Poland ee Robert Lewandowski inuu isaga tago Bayern Munich dhammaadka xilli ciyaareedkan, una dhaqaaqo Real Madrid.
Lewandowski ayaa lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Real Madrid sanadihii lasoo dhaafay, wadahadaladuna mar walba waa ay burburi jireen sababa la xiriira in Bayern Munich aysan dooneynin inuu ka tago laacibkan.
Laakiin hadda xaaladda gabi ahaanba way ka duwan tahay, sababtoo ah weeraryahanka reer Poland qandaraaskiisu wuxuu dhacayaa xagaaga 2022, mana ku fikirayo inuu dib u cusbooneysiiyo sababtoo ah wuxuu doonayaa inuu baxo xagaaga soo socda.
Wargeyska wuxuu warbixintiisa ku sheegay in Lewandowski uu ka niyad jabsan yahay in aanu ku guulaysan abaal-marinta Ballon d’Or ee uu Lionel Messi ku guulaystay sanadka 2021, isaga oo aaminsan inuu ugu yaraan hal mar u qalmo abaal-marinta labadii sano ee la soo dhaafay, balse abaal-marinta ayaa la kansalay sanadkii 2020 sababo la xiriira caabuqa Korona Fayras, iyadoo sanadkana uu kaga guuleystay Messi.
Wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in Lewandowski uu si buuxda uga warqabo in u dhaqaaqistiisa Real Madrid ay kordhin doonto fursada uu ku heli karo abaal-marinta Ballon d’Or, sababtoo ah saxaafada ayaa diirada saari doonta isaga, waxaa kale oo jiri doona in ciyaarihiisa si weyn loo daawan doono.
Caqabada kaliya ee ka hor istaagi karta dhamaystirka heshiiskan ayaa ah in kooxda Real Madrid ay doonayso inay xagaaga la soo wareegto Kylian Mbappe, halka sidoo kale maamulkuna aanu doonayn in uu ka tago Karim Benzema kaas oo soo bandhigaya qaab ciyaareed heer sare ah, sidaas darteed, waxaa jiri doona ciriiri weyn oo ka jira weerarka Real Madrid haddii ay dhacdo inuu yimaado weeraryahanka reer Poland.